Mari inodhura zvikuru yedhijidhi muna 2022. Inodhura mari yakawanda yemari nhasi. Ndeipi mari inodhura zvikuru yedhidha?
Nhamba yepamusoro gumi inodhura yakawanda yemari yemadhora nemutengo weiyo imwe yemari yemari muUS $ madhora (USD) panguva ino.
Mari inodhura zvikuru yedhijidhi mukati 19/01/2022
Wrapped Bitcoin (WBTC) 42 302 $
Bitcoin (BTC) 42 301 $
renBTC (RENBTC) 42 284 $
Bitcoin BEP2 (BTCB) 42 274 $
yearn.finance (YFI) 33 209 $
Ethereum (ETH) 3 157 $
Maker (MKR) 2 058 $
PAX Gold (PAXG) 1 820 $
Keep3rV1 (KP3R) 1 434 $
BNB (BNB) 469.99 $
Iyo inodhura zvakanyanya digital mari ndeye Cryptoratesxe.com sevhisi inoratidza yepamusoro mari yemadhora ine kukosha kwakakwana kwemari imwe chete kwemwedzi mitatu yadarika.
Iyo webhusaiti yepamhepo "iyo inodhura zvakanyanya digital mari" inoshandisa yakavhurika masosi kubva kune digital mari kuchinjanisa uye inogadzira chiyero cheiyo inonyanya kudhura crypto munguva chaiyo.
Kuresa digital mari kunoonekwa pamutengo wemari imwe chete. Izvo zvinodikanwa kusiyanisa kukosha kwemari kubva mukuvandudzwa kweiyo digital mari i.e. iyo kukosha kwakakwana kwese kwemakristcheni akaburitswa nemari iyi.
Iko kukosha kwakakwana kana chinyorwa chemari yese inoratidzwa neimwe webhusaiti webhusaiti mari yemadhora misika yemari .
Rondedzero yemari inodhura zvakanyanya mari yemadhora iri kungogara ichichinja, nekuti kutengeserana kwekristaro kuri kuenderera, uye iyo digital mari exchange rate iri kukura kana kudonha.
Shandisa iyo "inodhura zvakanyanya crypto" sevhisi pamhepo uye mahara.
Iyo yepamusoro yepamusoro inodhura mari yemadhora yanhasi 19/01/2022 inomiririrwa nekusarudzwa kwegumi pamadhizaini ekurongedza kurongeka kubva kune anodhura zvakanyanya kusvika akadhura, mukuburuka kwemarongerwo emutengo.
Iyo yakakwira mutengo we crypto inoratidzwa mumadhora kuitira nyore kuzvienzanisa.
Mwero weiyo inodhura zvakanyanya mari yemadhora inoratidzwa nhasi 19/01/2022, asi chiyero chinogara chichitariswa.
Zviri pachena kuti mangwana inodhura zvakanyanya mari yemadhora yemangwana ichaonekwa.
Shanyira webhusaiti yedu uye shandisa sevhisheni yepamusoro yepamusoro anodhura mari yemadhora kwanhasi.
Iyo inodhura zvakanyanya digital mari mu 2022
Iyo inodhura zvakanyanya digital mari ye 2022 ndeye yedu yemahara online service inoratidza inodhura mari ye mari yemadhora ye 2022.
Sarudzo yemari inodhura crypto inoenda mu 2022, asi isu tinoongorora mwedzi mitatu yekupedzisira yemari yekutsinhana. Mutengo uye masimba ehuwandu anoshanduka zuva rega rega uye saka chiyero chedu chepamusoro "mari yemadhora misika yemari 2022" inogona kuchinja zuva rega rega.
Mari yemadhora ine kukosha kwakanyanya.
Mari yemadhora pamwe neiyo yakakosha kukosha - chiyero chedu chekuyesa kukosha kwemakristokiti emari. Coin chimwe chezvinhu zvakajairika pakuverenga. Zviri pachena kuti iwe unogona kubhadhara uye chikamu chemari.
Naizvozvo, iyo chiyero chemakristcokiti ane huwandu hwakakosha iri pane mamiriro.
Pamusoro pemutengo we digital mari, zvakakodzera kutarisa huwandu wemari uye iyo yakazara nyaya yemari uye chiyero chayo, i.e. digital mari capitalization.
Mari yemutengo we crypto inofungidzirwa zvichienderana nedhora reUS. Izvi zvinokutendera iwe kuti uenzanise cryptos dzakasiyana pamutengo wepamusoro wemari.
Tafura yemakristuru anodhura zvakanyanya.
Tafura yemakristuru anodhura zvakanyanya - zvichionesa ratidziro yedu yepamusoro yemari inonyanya kudhura ye mari yemadhora.
Mune iyo tafura yemari inodhura zvikuru iwe unogona kuona zita reiyo digital mari uye huwandu hwayo hwekutsinhana mumadhora eUS.
Paunodzvanya pane imwechete inodhura mari yemadhora patafura, iwe uchaendeswa kune yakazara ruzivo peji peji yeiyo chiyero cheiyi crypto.
Iyo inodhura zvakanyanya digital mari chati.
Iyo yakanyanya kudhura digital mari chati ndeyimwe yemahara pamhepo chishandiso iyo inoratidza yepamusoro yepamusoro yeinonyanya kudhura mari yemadhora.
Chati yemakristuru anodhura zvakanyanya anoratidza mutengo wegumi yepamusoro cryptos yewakanyanya kukosha.